Hal meyd oo kamid ahaa dadki lagu weeraray Countiga Mandera oo aan wali la aqoonsanin – The Voice of Northeastern Kenya
Hal meyd oo kamid ahaa dadki lagu weeraray Countiga Mandera oo aan wali la aqoonsanin
Hal meyd oo kamid ah meydadka dadki ku dhintay weerarki lagu qaaday magaalada mandera maalinta talaadada ayaa ilaa iyo hadda wali la aqoonsan la’yahay waxana ay taas keentay in hay’ada qaran ee maareynta musibooyinka ay ka codsato dadweynaha in qofki u ruux ka maqan yahay u tago qeybta meydadka lagu keydiyo ee Chiromo si loo ogaado ruuxa u yahay qof ilaa iyo hadda la aqoonsan la’yahay.
Hay’ada ayaa sheegtay in meydkaas ay u maleyneyso in u yahay qof lagu magacaabo Charles Mutie balse aan la xaqiijinin arrintaas.
Hay’ada ayaa sidoo kale sheegtay in ehelada iyo qaraabada ee meydadka la aqoonsaday loo ogolaaday in ay duugtan.
Senetarka countiga Nairobi Mike Sonko ayaa sheegay in u gadiidka lagu qaadi lahaa u ka caawin doono meydadka 11-ka qof ee la aqoonsaday isago sheegay in u isku xilqaami doono sidi meydadkaas loogu geyn lahaa ilaa iyo countiyada ay kasoo kala jeedan.
Dadkan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Mandera habeenimada talaadada ahayd kaas oo ay masuuliyadiisa sheegatay Al Shabaab waxana xiliga weerarka lagu soo qaaday ay ku sugnaayen hotel kuyaala magaaladaasi.
Kadib weerarkaas ayaa magaaladaas u dhow xuduuda u waddanka la leeyahay soomaalia ay dawladda kusoo rogtay bandow socon doono mudo dhan 3 bilood.
← 25 qof oo lagu dilay waddanka bartamaha Afrika
Masar oo xabsi daa’in ku xukuntay qaar kamid ah tageerayaasha madaxweynihi hore ee dalkaas →